गायक भिम लिम्बु | Sangeet Khabar
गायक भिम लिम्बु
गायक भिम लिम्बु संग गरिएको अन्तरंगको सम्पादित अशं प्रस्तुत छ-
हिजो आज त हल्का फुर्सदमै छु । हालै चलचित्र ‘हामी शर्णाथी’को गीत सकेर बसेको छु । दशै भर्खर सकियो अब पुन: नियमित कार्यमा फर्कने बेला भयो । तिहारमा हुने सांगीतिक कार्यक्रमका लागि धेरै ठाँउ बाट अफर आएको छ,अब कार्यक्रममै ब्यस्त भईन्छ । अब केहि दिनमै २ वटा गीतको भिडियो छायाँकन गर्ने तयारीमा पनि छु ।
नयाँ गीत कहिले आउछ अब?
मेरो नयाँ गीतको भिडियो छायाँकन गरिसकेको छु अब त आईहाल्छ नि । आशा राखौ तिहार अघीनै आईहाल्छ कि ।
गीतका बारे केहि जानकारी गराउनुस् न
मेरो नयाँ गीत ‘आसुँले भिझाई सिरानी’बोलको हो । यस गीतमा शब्द,संगीत जबिक केसिको छ भने भिडियोलाई युगल पोमोले निर्देशन गर्नुभएको छ । नयाँ गीतको भिडियोमा नायिका केकी अधिकारी र गगन शाहीले अभिनय गर्नु भएको छ । बिदुर पाण्डेको छायाँकन रहेको भिडियोलाई निसान घिमिरेले सम्पादन गर्नुभएको छ । मेरो लागि त भिडियो एकदमै राम्रो बनेको छ अब दर्शकहरुलाई कस्तो लाग्छ रिलिज पछि नै थाहा हुने बिषय हो ।
कस्तो रह्यो दशै?
देशको बर्तमान अबस्थाका कारण यसपटकको दशैमा कुनै रौनक थिएन । तर रितिरिवाज र संस्कारका कारण मात्र दशै मानिएको झै भयो । ईन्धन अभावले गर्दा बिगतका बर्षहरुमा झै आफन्त कहाँ टिका थाप्न जान पनि सकिएन भने सांगितिक कार्यक्रम पनि कम आयोजना भए र अफर आएका ठाउँमा पनि सहभागी हुन सकिएन । यसपालिको दशै भुल्न नसकिने रह्यो । अब तिहार चाहि यस्तो नहोस ।
फिल्मका गीत पनि गाउन सुरु गर्नु भयो ? कस्तो अनुभब गर्नु भएको छ?
हो,केहि समय अघि देखी सुरु गरे,मैले गाएको चलचित्र ‘चंखे शंखे पंखे’को ‘फेसबुकले’ बोलको गीतलाई दर्शक,स्रोताले अत्याधिक मन पराईदिनु भयो,गीत निके हिट भयो । फिल्मका गीत गाउदा मिठो अनुभब रहयो । आफ्ना गीत गाउदा पैसा जान्छ,फिल्मका गीत गाउदा पैसा आउछ,गजब हुन्छ नि होईन र (हास्दै)
एल्बम र फिल्मका गीत मध्ये कुन गीत गाउन सजिलो
एल्बमकै गीत गाउन सजिलो हुन्छ । फिल्मको गीत अरुको शैलि र लयमा गाउन पर्नेहुन्छ,जसको लागि अभ्यास पनि हुदैन । तर पब्लिसिटिको रुपले पनि फाईदा चाहि फिल्मकै गीत गाउदा हुन्छ । अब पप गायन संगै फिल्मका गीतलाई निरन्तरता दिने सोचमा छु ।
पप संगीतको अबस्था कस्तो छ ?
म पप र आधुनिक दुबै संगित रुचाउने गायक हुँ । यि दुबै गीतका बजार संतोषजनक नै छ। पप भन्दा फिल्मी चाहि राम्रो छ भन्ने मेरो बुझाई छ । एल्बम नबिके पनि सामाजिक संजालकै कारण पनि कलाकारको प्रमोसन भने हुन्छ साथै युटुब राईट र कार्यक्रले पनि कलाकारलाई टिकाईरहेको छ ।
म्युजिक टुर बारे ।
मैले धेरै देशको टुर गरेको त छैन तर जति गरे त्यहाँका दर्शको को नजरमा परेको छु । मैले केहि समय अघि मात्रै ईजरायलमा सांगीतिक कार्यक्रम गरे भने अहिले सम्म हङकङ र कतारमा कार्यक्रम गरेको छु । अब छिट्टै हङकङ,जापान,कोरिया र युएईमा कार्यक्रम गर्दैछु ।
मेरा प्रिय दर्शक,स्रोतालाई धेरै धेरै धन्यबाद दिन चाहन्छु मेरा गीत सुन्दै आईरहनु भएको छ । साथ पनि दिदै आईरहनु भएकै छ । आगामि दिनहरुमा पनि यसरी नै माया र साथ दिनेहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । दर्शक,स्रोताको माया र साथले नै म आज यस स्थान सम्म आउन सफल बनेको छु यसकारण अझै मिठा-मिठा गीत गाउने कोसिस गर्नेछु । नेपाली गीत-संगीतलाई माया गरिदिनुहुन सबैमा आग्रह गर्दछु ।
सबैको प्रेम प्रस्ताब स्वीकार्छु : सिर्जु अधिकारी
जब स्रोता रमाउछन् तब म रमाउँछु : रोजी
संगीत एक महासागर हो:गायक लक्षु निरौला
‘लप्पन छप्पन’ सार्बजनिक (भिडियो)
‘मलाई नभेट है’सार्वजनिक
कमलाको छम्मा छम्मा (भिडियो)
ईन्दिरा जोशी बनिन् लोकल ब्युटी (भिडियो)
संगीतमा राजइन रुचालको आगमन
कबड्डी-कबड्डीको अडियो गीत सार्बजनिक
अकबरी सुनलाई‍‍ सार्बजनिक (भिडियो)
कुवेतमा ‘फेवाताल’ र ‘ढाडे बिरालो’ हिट
2014 | All rights reserved by SangeetKhabar.com.